Shabaab-kii ku sugnaa magaalooyinka Bu’aale iyo Jamaame oo xalay wajahay weerarradii ugu cuslaa – Hornafrik Media Network
Shabaab-kii ku sugnaa magaalooyinka Bu’aale iyo Jamaame oo xalay wajahay weerarradii ugu cuslaa
By Liibaan Nuur	 On Apr 2, 2020
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya duqeymo xoog leh oo xalay ka dhacay magaalooyinka Bu’aale iyo Jamaame ee koonfurta Soomaaliya, waxayna duqeynta koowaad ka dhacayday degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose.
Duqeynta oo lala beegsadey xero ciidan ayaa dhacday xilli sida la sheegey dagaalamayaasha Al-Shabaab loo qeybinayey saanad ciidan ay ku howl galaan, saanadaas oo ilo xog ogaal ah ay xaqiijinayaan inay tahay mid cusub oo dhawaan soo gaartay ururka.
weli lama xaqiijin karo qasaaraha rasmiga ah, hase yeeshee saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaa sheegay in guud ahaan ay baabi’ yeen dileen dagaalamayaashii goobta ku sugnaa iyo saanadii loo qeybinayeyba. Waxayna dadka deegaanku sheegeen in ay saqdii dhexe ee xalay maqleen jugta illaa lix gantaal oo xerada ku dhacday iyo rasaas mudo socotay.
Duqeynta labaad ayaa ka dhacdey degmada Bu,aale ee gobolka Jubbada Dhexe, waxaana dagaal kooban oo foolka ka foolka dhexmaray dagaalamayaasha Al-Shabaab oo xaruunta degmada ku sugnaa iyo ciidamo xiran qalabka habeenkii wax lagu arko, kuwaas oo sida la sheegay laba diyaaradood uga degay meel aan ka fogeyn magaalada.
Mudo yar kadib waxaa la sheegay in ay hawada soo gashay diyaarad labaad, isla markaana la beegsaday ilaa afar xarumood oo ku kala yaallay duleedka degmada Bu’aale, dadka deegaanka ayaa soo weriyey in duqeynta kadib ay magaalada dhan is qabsatay rasaas socotay mudo ku dhaw saacad.
Goobaha sida gaarka ah loo beegsadey ayaa kala ahaa 3 guri oo ay daganaayeen sariil ka tirsan amniyaadka Al-shabaab, kuwaas oo duqeyn lagu burburiyey, saldhiga degmada oo gantaal lagu dhuftay iyo dagaal toos ah oo lagu qabsaday mudo kooban xaruunta degmada, sida ay noo sheegeen saraakiisha u hadashay sirdoonka Soomaaliya, sidoo kale xarunta degmada waxay sheegeen in lagala soo baxay rag dhaawacyo ah, kuwaas oo sheegeen in si weyn loo doondoonayey.
Seddaxda guri ee lagu beegsaday duqeymaha Bu’aale ka dhacay mid ka mid ah waxay xaqiijiyeen saraakiisha noo warantay ee dowladda Soomaaliya in uu lahaa sarkaal caan ah oo la yiraahdo Abuu Aanas, kaas oo duqeynta ku dhintay, sida ay xaqiijiyeen.
Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in howlgalladaan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka kumaandooska Soomaaliya ee Danab iyo diyaarado dagaal oo laga leeyahay dalka Faransiiska. Waxay kaloo sheegeen saraakiishani in uu jiro khasaare culus oo soo gaaray Al-Shabaab, isla markaan ay dib kasoo gudbi doonaan.
Madaxweynaha Afghanistan oo xalay xabsiyada kasii daayey maxaabiistii Taliban
QM oo cambaareysay khatar bini’aadanimo oo soo wajahday caasimada dalka Libya